Desperate Zimbabweans use cell phone transfers to get cash | AP International | The Brunswick News
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, vendors are seen on their mobile phones while selling cash in Harare, Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency.
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, a client collects coins he bought from a vendor at a premium in Harare, Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency.
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, vendors are seen on their mobile phones while selling cash at a premium in Harare, Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency.
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, a vendor transacts on his mobile phone while selling cash in Harare Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency.
In this photo taken Thursday, Aug. 8, 2019, a vendor is seen on his mobile phone while selling cash at a premium in Harare, Zimbabwe. With inflation soaring and cash in short supply, many Zimbabweans transfer funds using their mobile phones and pay a premium to get currency.